उपत्यकावासीले अझै एक बर्ष धुलो खानुपर्ने : कति किमि सडक खनिदैछ राजधानीमा?
ARCHIVE, NEWSPAPER » उपत्यकावासीले अझै एक बर्ष धुलो खानुपर्ने : कति किमि सडक खनिदैछ राजधानीमा?
काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउन सडक अन्दा निस्किएको माटोले अहिले काठमाडौं उपत्यका धुलाम्मे छ । उपत्यकाबासीले धुलोबाट छुटकारा पाउन अझै एक बर्ष कुर्नुपर्ने भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
आयोजना आफैले कालोपत्रे गरिदिने सम्झौता सरकारसँग गरेपनि पाइप बिछ्याउने कामले पूर्णता नपाएपछि अहिले कालोपत्रे गर्ने काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । आयोजनाले पानीको पाइप गाड्न उपत्यकामा अहिले पाँच सय किलोमिटर भन्दा बढी सडक खनेको छ । त्यसमध्ये ५० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गर्ने भाग सडक विभागकोमा परेको छ ।